लेखनका सुरुवाती दिनमा गजलकार साधना प्रतिक्षालाई म कुन विधामा कलम चलाउ भन्ने दुबिधा थियो । गजल लेखनबाट आफ्नो साहित्यिक यात्राको प्रारम्भ गरेकी प्रतिक्षालाई उनका अग्रहहरुले गजल नलेख्न सुझाईरहेका थिए । पहिलो पटक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय गजल महोत्सवको एक सत्रमा उनी लेखनको सुरुवाती चरणको सम्झना गर्दै थिईन्– ‘मलाई मेरा अग्रजहरुले साहित्यमा आफ्नो परिचय बनाउनु छ भने तिमी कविता लेख भन्नु भएको थियो । एक मन लाग्थ्यो गजल लेखेर म पनि स्थापित हुन सक्दिनकी । फेरि अर्को मनले गजल मोह त्याग्न सकेन । म आज पनि गजलमै रमाउँछु ।’
गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलसँग पनि गजल लेखनका क्रममा भोगेका कयौं तिता अनुभूतीहरु छन् । गजल लेखेकै आधारमा उनलाई अग्रज भनिने कविहरुले थुप्रै पटक चुड्के कवि भनेर सम्बोधन गरेका छन् । लामो समयदेखि गजल लेख्दै आएका पौडेललाई आजका पुस्ताको गजलप्रतिको आकर्षण देखेर निक्कै खुशी लाग्छ । हिजो गजलकारहरुलाई चुड्के कवि भनेर सम्बोधन गर्नेहरुनै आज महफिलमा आएर गजलमा ‘वान्स मोर’ गर्छन् । पोडेललाई आफूले जितेको जस्तो, नेपाली गजलले जितेको जस्तो गौरव बोध हुन्छ ।
समाजमा रहेको लैङ्गिक असमानता जस्तै नेपाली साहित्यमा पनि विधागत असमानता छ । नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा धेरैले पढिने र लेखिने बिधा गजल भएको छ । यो कुरामा कुनै विमती छैन् । तर, विमती गजल लेख्नेहरु बिचमानै छ । एकथरी गजलकारहरु स्थानिय लयलाई मान्यता दिनु पर्छ, स्वतन्त्र रुपमा लेखिएका गजल पनि बहरमा लेखिएका गजल भन्दा अब्बल छन् । अर्काथरी भन्छन् ‘बिना बहरमा लेखिएका गजल गजल हुँदै होईनन्’ ।
नेपाली गजलको इतिहास त्यत्ति लामो छ्रैन् । नेपाली गजलको प्रारम्भिक स्थितीलाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा पहिला मोतिराम भट्टलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । मोतिराम भट्ट जो आफूले गजलमात्रै लेखेनन्, मोतीमण्डली नै खडा गरेर नेपाली गजलको उत्थानमा निरन्तर लागिरहे । मोतीराम भटट्को उदयसँगै नेपाली गजलले शृङ्गार धारलाई सवल रुपमा स्थापित गरायो ।
मोतिराम भट्टपछि भीमनिधी तिवारी, नरदेव पाण्डे, शम्भुप्रसाद ढुंगेल, उपेन्द्र बहादुर जिगर, लक्ष्मीदत्त पन्तले समकालीन नेपाली गजलको यात्रामा अर्को उदाहरणीय कार्यहरु गरे । त्यसपछि नेपाली गजलहरु लेखिए तर कम लेखिए ।
२०३५ सालमा गजल लिएर ज्ञानुवाकर पौडेल देखा परे । त्यसपछि उनको उपस्थितिसँगै सुस्ताएको नेपाली गजलले पूर्नजीवन पायो । फलस्वरप ज्ञानुवाकर पौडेललाई नेपाली गजलको पूर्नजागरणकर्ताका रुपमा लिइन्छ ।
ज्ञानुवाकर पौडेलपछि ललिजन रावल, रवि प्राञ्जल, बुँद राना, डा. कृष्णहरी बराल, डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमी लगायतका गजलकारहरुले नेपाली गजलको अवस्थालाई वर्तमान अवस्थासम्म डोर्‍याउँदै ल्याएको तथ्य हामी सामु छ ।
नेपाली गजल सङ्लिादै जाने क्रममा लेखिँदै जाने क्रममा गजलमा विभिन्न धारहरु पनि देखा परे । तर जति धारहरु देखा परे पनि ती सबैको उद्धेश्य गजलको उत्थानकै लागि रहेको थियो ।
समय फेरिदैँ गयो । मान्छेका चाहनाहरु फेरिदैँ गए । गजलको स्वरुप पनि फेरिदैँ गयो । एकबाट दश, दशबाट सय हुँदै हाल आएर हज्जारौँको संख्यामा गजल लेख्नेहरु जन्मिए । अहिले युवा पुस्तामा सबैभन्दा बढी लेखिने विधा पनि गजल भएको छ । जति जति गजलहरु लेखिए । ती लेखिएका गजलहरुमाथि समालोचना पनि हुँदै गए । ज्ञानुवाकर पौडेल भन्नुहुन्छ–अबको नेपाली गजलमा कविताको स्वाद आउन जरुरी छ ।
स्वतन्त्र रुपमा गजल लेख्दै आएका गजलकार बाबु त्रिपाठी स्वतन्त्र रुपमा गजल लेखिनु वर्तमान समयको माग भएको जिकिर गर्छन् । देशभरी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत गजल अभियानमा होमिएका त्रिपाठी ५ वर्ष अघिसम्म पनि नेपाली गजलको स्थिती निक्कै नाजुक रहेको बताउँछन् । उनी यो जगल, त्यो गजलकार भनेर बिवाद गर्नु भन्दा पनि गजलकारहरु एक ढिक्का हुनु जरुरी भएको उल्लेख गर्छन् ।
अग्रज गजलकार ललिजन रावल गजलले लय चेतनालाई भने पकृनु पर्ने उल्लेख गर्छन् । रावल भन्छन् ‘बिवाद हामीले बनाएको हो । गजल गजल जस्तै हुनुपर्छ । गजल लेख्ने हो भने गजल लेखौँ । लय भनेको नै बहर हो । गजल गाईने बिधा हो, त्यसैले लेखेपछि आफैं लय आउँछ । जे हो त्यो हुनु पर्छ भन्दा बिबाद गर्नु जरुरी छैन ।’ डा. कृष्णहरी बराल पनि गजलकारहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा लेख्न दिनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
यता, अर्का गजलकार आवाज शर्मा बहरमा रहेर नलेखिएका गजललाई कुनै अर्कै नाम दिनु पर्ने धारणा राख्छन् । उनले समय अनुसार परिवर्तन भएको दौरा र टिसर्टलाई उदाहरण देखाएर गजल पनि लेखनको सिद्धान्तलाई हेरेर सिद्धान्त बाहिर परेका गजललाई अर्कै नाम दिन आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘ हामीले हेर्दाहेर्दै हाम्रो आँखै अगाडि तीजले मौलिकता गुमाएर रत्यौलीको अर्को संस्करण बन्न पुगेको त देखेकै छौँ । तिनका अनुयायी र प्रशंशकहरू तीज भन्दा धेरै भएको पनि देखेकै छौँ । विभिन्न अवसरमा ती गीतमा तपाईं हामी पनि नाचेकै छौँ र रमाएकै छौँ । के तपाईलाई, मलाई मन पर्‍यो भन्दैमा त्यो रत्यौली गीत तीज गीत नै हुने हो र ? अब अर्धनग्न, द्विअर्थी, शृङ्गारिक भाव भङ्गिमा र शब्द सहितका गीत नृत्यले तीजको गरिमा र अस्तित्वलाई बचाउला र ? भीड उतै छ, यो बानियाँ युगमा पैसा उतै छ । तपाई साँच्चै तीजको अनुरागी हो भने तपाईको धारणा के होला ? उनी नेपाली गजल जुँगाको लडाईले गर्दा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँछन् ।
आङमा लगाउने नै हो, दौरा र टिसर्ट पक्कै फरक कुरा हुन् । टिसर्टलाई टिसर्टकै रूपमा चिनौँ, नाम नभए कुनै एउटा सम्मानित नाम दिऊँ, तर दौरा नै भनेर दौरा र टिसर्ट दुवैको अपमान नगरौँ ।’ उनको यो भनाई पछिल्लो समय लोकप्रिय भएको स्वतन्त्र रुपमा लेखिएको गजल र गजललले पाएको वान्समोरप्रति लक्षित देखिन्छ ।
नेपाली गजल अभ्यासमा देखिएको विवादै विवादको महाभारतले गजल लेखनमा आउन खोज्ने नयाँ पुस्ता उदाशीन देखिएको बताउँछन् अछामका गजलकार कमल सघर्ष । उनी भन्छन्– गजल आयातित विधा हो । गजल जुन क्षेत्रबाट नेपालमा भित्रियो, त्यो क्षेत्रको तात्कालिन गजल लेखनको अवस्थालाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।
गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेल भने गजलमा बहर भन्दा पनि काव्यिक चेतना जरुरी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘अहिले गजलमा विचारबोध छ । चेतना छ । यो खुशीको कुरा हो ।’ यो समय लैङ्गिकमैत्री समय भएकाले साहित्यमा पनि विधागत विभेद हुन नहुने उनको भनाई छ । तर, गजलको संरचना भत्कनु नहुने उनको भनाई छ ।
गजल महोत्सव सँगै विभिन्न खाले विवादहरु पनि सार्वजनिक भए । तर, गजल महोत्सवका क्रममा देखिएका कमिकमजोरी भन्दा प्रतिष्ठानले गजललाई विधागत मान्यता दिनुनै ठूलो कुरा भएको गजलकार कपिल अञ्जान बताउँछन् ।
गजल महोत्सव गजल विकासमा कोशेढुङ्गा हुने छ : प्रा.डा. हेमनाथ पौडेल
काव्य विभाग प्रमुख –नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान / संयोजक राष्ट्रिय गजल महोत्सव
अरबी, फारसी र हिन्दी हुँदै गजल नेपालमा भित्रियो । नेपालीपन सहितको विस्तारित स्वरूपमा अहिले गजल नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका हरेक देश, जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ लेखिँदै छ । गैरराज्य वा निजी क्षेत्रबाट गजलको विकास, विस्तार र परिष्कारका निम्ति अनेक कार्य भएका देखिन्छन् ।
यस क्रममा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले गजललाई प्राथमिकतामा नराखेको र गजलका निम्ति केही गर्न नचाहेको जस्ता गुनासा सुनिए । हुन त यसअघि पनि प्रतिष्ठानले गजलसम्बन्धी गोष्ठीहरू नगरेको होइन तर यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो । म काव्य विभागको जिम्मेवारीमा रहेका कारण मलाई यसबारे निकै पेचिलो दबाब आइरहेको महसुस भैरह्यो ।
एउटा राम्रै कार्यक्रम गरौं गजलका विषयमा । यस क्रममा मैले प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य सचिवसँग सल्लाह गरें, प्रस्ताव राखें । उहाँहरूले राम्रो कुरा हो, यो आवश्यक छ, संयोजन गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि गजल क्षेत्रकै केही व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गरियो । पटक पटकको छलफल भयो । सकेसम्म राष्ट्रव्यापी बनाउने प्रयत्न गर्ने कुरा भयो । अन्तत: २ दिने गजल महोत्सव गर्ने निर्णय स्वरुप प्रज्ञाप्रतिष्ठानमै उक्त महोत्सव सम्पन्न भएको हो ।
नेपाली गजलमा लामो समयदेखि मतभेद र विवाद कायम छन् । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि थियो । म आफू गजलबारे त्यति चासो नराखे पनि गजल पनि काव्यकै अङ्ग भएको र काव्य विभाग नै त्यसका लागि जिम्मेवार भएको महसुस गरेर एउटा महोत्सव वा गोष्ठीको आयोजना गर्दै उक्त मतभेद र विवादको निरूपण गर्नु पनि उपयुक्त होला भन्ने लाग्यो ।
यसै क्रममा छोटो समयमा प्रतिष्ठानले देशभरबाट हरेक प्रदेशबाट ५ जनाका दरले युवा गजलकार र प्रौढ अतिथि गजलस्रष्टाहरूसमेतलाई एकै थलोमा राखेर अन्तत: गजल महोत्सव सम्पन्न मात्र गरेन, गजलमा देखिएका विवादका जडसम्म पुगेर एउटा मध्यमार्गी घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गरियो । मलाई लाग्छ, यो महोत्सव नेपाली गजलको विकास, विस्तार र परिष्कारका लागिसमेत एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
नेपाली गजलमा देखिएको विवादलाई किनारा लगाउँन भन्दै गजल महोत्सवबाट ५ बुँदे घोषणा पत्र जारि गरियो । सार्वजनिक घोषणा पत्रमा गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै गजल बहर वा छन्दमा लेखिनु पर्छ भन्ने कुरालाई ममन गरी नेपाली गजल लेखनको मौलिक पक्षलाई सम्मान गर्ने, गजलमा अन्तरवस्तु र रुप पक्षमा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अंगीकार गर्दै विचार, तर्क र कल्पनाको प्रस्तुती चमत्कारपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सार्वजनिक घोषणा पत्रमानै गजलकारहरु पुन: विभाजित देखिएका छन् । घोषणापत्रले के भन्यो भन्ने अस्पष्टता रहेको कतिपय गजलकारहरुको गुनासो छ ।
गजल बिस्तारमा संस्था
नेपाली गजल बिस्तारका लागि देशैभरी विभिन्न संघ संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । संघ संस्थाहरु यतिनै छन् भन्ने यकिनचैं छैन् । राजधानीमै दर्जन बेसी गजलका संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा चर्चामा रहेका मधुबन साहित्यिक प्रतिष्ठान र अनाममण्डली हुन् । यि दुई संस्थाले गजल लेखन तथा गजलको विकासको निम्ति निक्कै ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
नेपाली गजलकै लागि भनेर बाहिर रहेका गजल सन्ध्या, पोखरा, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान, बाँके । गजल संगम– मकवानपुर, गजल संगम सिन्धुली, हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान– चितवन, गजलसागर नेपाल– बुटवल जस्ता लगायतका संस्थाहरुले नेपाली गजलको उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको छन् ।
नेपाली गजलकारहरुको संख्या बीस हजार भन्दामाथि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कुन विधाका स्रष्टा कति भन्ने आधिकारिक आँकडा राख्ने कुनै पनि संस्था नभएका कारण गजलकारहरुको संख्या यतिनै छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
लामो समयदेखि सर्वनाम नाटक घरसागको सहकार्यमा गजल महफिल चलाउँदै आएका बाबु त्रिपाठी सक्रिय गजलकारहरु २ सयको हाराहारीमा भएको बताउँछन् । ती गजलकारहरु आफू पनि उत्कृष्ट गजल लेख्नछन् र अरुलाई पनि लेख्न प्रेरित गर्छन् ।
उनी भन्छन्–७७ वटै जिल्लाहरुबाट आएका गजलकारहरुको बसोबास हुने भएकाले पनि काठमाडौंमा रहेका गजलकारहरुको गति बिधि अन्य क्षेत्रको भन्दा अब्बल देखिन्छ नै । तर, वास्तविकता भने यो होइन् । हाल आएर काठमाडौं बाहिर गजलका गतिबिधिहरु उत्साहजनक रुपमा रहेको पाइन्छ । जसको उदाहरणका लागि मध्य पश्चिम र सुन्दर सुदुर पश्चिमलाई लिन सकिन्छ । यसका अलावा पूर्वाञ्चलको गतिबिधि पनि हाल असाध्यै सुधारिएको अवस्थामा छ । जसले गर्दा गजलको माहोल दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
नेपाली गजलका पुस्तक वर्षमा २ दर्जन भन्दा बढी प्रकाशन हुने गरेको पाइन्छ । प्रकाशन भएका मध्ये पनि एक प्रतिशत गलकारका कृतिमात्रै प्रकाशकले प्रकाशन गर्ने गरेको तथ्य छ । बाँकी कतिपय गजल संग्रहहरु व्यक्तिगत सहयोगबाट प्रकाशन हुने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा गजलकारहरुले प्रकाशहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् गजलको पनि ठूलो मार्केट छ भन्ने कुरा ।
बिस्तारै बिस्तारै प्रकाशकहरुलाई विश्वास दिलाउन सकियो भने गजलको पुस्तकको प्रकाशनको संख्या बढ्ने निश्चित देखिन्छ । तर यसका लागि गजलकारहरु सचेत हुन पर्ने देखिन्छ । नाम मात्रको गजलबाट गजलकारहरु मुक्त हुन पर्ने देखिन्छ । प्रकाशकले विश्वास गरेका गजलकारहरुले प्रकाशनका लागि गजलको संख्या पुर्‍याउन नसकेको केही प्रकाशकको गुनासो छ । प्रकाशकलाई पूर्ण विश्वास भएमा गजलको पुस्तक प्रकाशनमात्र होइन गजलकारले पारिश्रमिक समेत पाउने देखिन्छ । यसको उदाहरणमा गजलकार अमला अधिकारी र विपिन सलामीलाई लिन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय गजल गायनको परम्परा बृद्धि भएको छ । पछिल्लो वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपाली चलचित्रमा समेत गजललाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको छ । तर यसको श्रेय डा. कृष्णहरी बराललाई जान्छ । उनैले नेपाली सिनेमामा गजल भित्र्याएका हुन् । तर, गीतको तुलनामा गजल रेकर्ड भने निक्कै कम हुने गरेका छन् । यसका अलावा धेरै गजलकारहरुले गजल लेखनमा वाचनलाई प्राथमिकता दिएका कारण पनि कम संख्यामा गजल रेकर्ड हुने गरेको संगीतकार हरि लम्साल बताउँछन् । करिब १५ सय गीतमा संगीत भरेका लम्साल आफूले करिब ५० गजलमा संगीत भरेको बताउँछन् ।
काठमाडौंका दरबारमार्ग तथा ठमेलतिर केही संख्यामा गजल साँझहरु खोलिएका छन् । तर खोलिएका ती गजल साँझहरुमा गजल भनेर गीत प्रस्तुत गरिदै आएको छ । केही गजल साँझहरुमा थोरै मात्रामा गजल सुनाए पनि बिच बिचमा गीतनै प्रस्तुत गर्ने गरेको गजल पारखीहरु बताउँछन् । यसको कारण पनि नाम मात्रको गजल साँझ हुने गरेको देखिन्छ । अझैं पनि वास्तविक गजल साँझहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
टिकटमा बिक्री भइरहेको गजल साहित्य ।
२०७२ सालबाट काठमाडौंको सर्वनाम थिएटरमा ‘महफिल’ सुरु भएपछि अहिले आएर देशैभरी टिकटमा गजल सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । ५ वर्ष अगाडिसम्म पनि गजलको स्थान यो अवस्थामा थिएन । सित्तैमा गजल सुन्नेहरु भेट्टाउन पनि गाह्रो पथ्र्यो । अहिले आएर नेपाली गजलको उत्थान सागसागै टिकटमा गजल सुन्ने वातावरण बढ्नु नेपाली गजलको उज्यालो दिनको सुरुवात हो भन्न सकिन्छ । काठमाडौंमा शीतल कादम्बिनीले सुरु गरेको गीत गजल र शीतल अनि रसिक राज लगायतले सुरु गरेको आभा काव्य लहर त्यसको एउटा प्रमाण हो । यस्ता प्रमाणहरु देशभर रहेका छन् । सिन्धुलीमा बरुण लामिछानेले सुरु गरेको गजल संगम र सुर्खेतमा भरत प्रमोद दाहालहरुले सुरु गरेको कार्यक्रम अर्को उदाहरण हो ।